Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo sheegay in Kenya ay qarka u saaran tahay inay ka baxdo Dacwadda Badda | Sagal Radio Services
Isagoo wariyeyaasha kula hadlayay ayuu sheegay in Kenya qarka u saaran tahay in dacwada kala dhaxeysa Soomaaliya ee taala Maxkamadda inay ka baxdo, kaddib markii dhowaan ay dalbatay in la hakiyo dhageysiga dacwadda ee 9-ka bishan ka bilaabaneysa Maxkamadda Hague.
Kenya ayaa muddooyinki u dambeeyay waday cadaadis caalami ah oo ay saareyso dowladda Soomaaliya, kaddib markii ay ogaatay inay guuldaro ka keeneyso dacwada taal Maxkamadda ICJ, taas bedelkeed ay raadineyso waddo kale oo aan Maxkamad aheyn.
Maalin ka hor ayay aheyd markii Guddiga Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika uu kulan gaar ah ka yeeshay arrimaha muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya, kaddib markii dowladda Kenya ay geysay soo jeedin ku saabsan in looga hadlo qaab Afrikaan ahaan.
Hase ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa diiday arrintaas, waxaana ay caddeysan in aanay raalli ka aheyn in meel aan aheyn Maxkamad lagu xaliyo arrintan.
Si kastaba ha ahaatee 9-ka bisha ayaa loo balansan yahay in Maxkamadda ICJ ay bilowdo dhageysiga dacwada Badda ee ka dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo la filayo in ka hor maalintaas in Maxkamadda go’aan soo saarto oo ku aadan codsiga Kenya ee ah in dacwada dib loo dhigo muddo 12 bilood.